Ngathi - Nanchang Lebang Garment Co., Ltd.
I-Nanchang Lebang Garment Co, Ltd., ebekwe e-Nanchang Jiangxi, e-China, ingumenzi wezinxibo ezinithiweyo, egxila kuyilo, ukuthengisa kunye nokuthengisa kweentsana / iimpahla zaBantu abadala, kubandakanya nezemidlalo, ibhatyi kunye nengubo, ihempe kunye ne sweatshi, ivesti kunye neetopu, isikipa kunye nehempe yePolo njl. Ngobungakanani bomgangatho weemitha zesikwere ezingama-8000 kunye nabasebenzi abangama-280 kwimizi-mveliso yayo, uNanchang Lebang Garment Co, Ltd isebenzisa yonke inkqubo yolawulo lomgangatho kwaye ivelisa imveliso yengubo esemgangathweni malunga neziqwenga ezingama-300,000 nganye Intengiso yethu ephambili iseMelika, iYurophu, uMzantsi Melika, imakethi yaseMzantsi Afrika. Ngaphezulu kweminyaka eli-10 yamava kunye nophuhliso, sifumene impumelelo enkulu, kwaye ngeli xesha sinedumela elihle kubaxumi bethu kwihlabathi liphela.
Kule minyaka ili-10 yophuhliso, siye saseka ulwalamano oluhle kakhulu hayi kuphela abaxhasi, ngokunjalo abathengisi eziphathekayo, kunye noshicilelo kunye nezimfakamfele mveliso, thina ngokunyanisekileyo ukuphuhlisa kunye nabathengisi bethu kwaye emva koko singakwazi ukunikela iimveliso arcade games kunye neenkonzo zethu abathengi.
Kufuneka sabelane ngenqaku lokuba ngexesha le-COVID-19, sijamelene nexesha elinzima, kunye nabathengi bethu abathengisi, emva kweminyaka emibini, siphumelele ubunzima kunye. , kwaye siqinisekile ukunika abaxhasi bethu inkxaso eyomeleleyo kwimarike, oko ngokuqinisekileyo kuthetha ukuba siya kubonelela ngeemveliso ezilungileyo kunye neenkonzo kumthengi wethu wokugqibela, akukhathaleki ukuba uthenga iimpahla kwimarike yesidlo sangokuhlwa, okanye kwiholo yedolophu, kwivenkile encinci yesitalato , Uya kufumana iimveliso zethu, sikwenzile oku kwamanye amazwe, kwaye siqinisekile ukuba kuyakubakho amazwe amaninzi kunye neemarike kwihlabathi liphela.
Wamkelekile ndwendwela iwebhusayithi yethu ngolwazi oluthe kratya, kwaye unxibelelane nathi, enkosi!
Iziphumo zanyanga zonke